Uluhlu lokujonga nge-imeyile: Amanyathelo ali-13 ngaphambi kokuba ucofe ukuthumela! | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Oktobha 7, 2011 NgoLwesithathu, Oktobha 26, 2011 Douglas Karr
Sipapasha i-heck ye-imeyile veki nganye kwaye ukufunda kwethu kuqhume kwabangaphezulu kwe-4,700 ababhalisile! Ndifuna ukwabelana ngeengcebiso zethu kunye noluhlu lokutshekisha esiya kulo veki nganye ngaphambi kokucofa iqhosha lokuthumela.
Ngaba umxholo wakho kufanelekile, kufanelekile, kulindeleke, kwaye kuxabisekile kumrhumo? Ukuba ayisiyiyo-sukuyithumela!
Nje ukuba uthumele i-imeyile, kukho izinto ezimbini kuphela umntu azifumanayo azibonayo… eyokuqala yeyokuba ivelaphi i-imeyile. Inga i-yakho Igama iyahambelana nothumelo ngalunye? Ngaba idilesi yakho ye-imeyile iyabonakala?
Into yesibini yeyakho umgca wokufunda. Ngaba kukukhaba iesile? Ngaba ngumgca wesifundo obatsala kwaye ubenze bafune ukuvula i-imeyile ukuze bafunde umxholo omkhulu ngaphakathi? Ukuba ayisiyiyo, abantu baya kuyicima ngoku.
Ukuba unemifanekiso, uyayisebenzisa Iithegi ze-alt Ukubhala okunye okubhaliweyo okuya kuqhuba umfundi ukuba akhuphele imifanekiso okanye akwazi ukuthatha inyathelo ngaphandle kwemifanekiso?
Ngaba ubeko lwakho kulula ukulufunda kwifayile ye- i sixhobo? Kangange-40% yazo zonke ii-imeyile ezifundwayo ngoku kwiselfowuni kwaye inani liyaqhubeka nokukhula minyaka le. Ukuba une-imeyile ebanzi enombhalo omde wokulandela, umfundi uza kukhathazeka xa esiya emva naphambili. Ukubetha ukucima kulula kakhulu.
Ukuba uthumela i-imeyile kwifomathi ye-HTML, ngaba kukho ikhonkco elilungileyo kwintloko yabantu ukuze bacofe kwaye jonga i-imeyile kwisikhangeli?
Ngaba uyijongile i-imeyile Upelo, igrama kwaye uphephe amagama anokukuhluza kanye kwifolda ye-imeyile ye-Junk?
Ufuna ukuba umfundi enze ntoni emva kokuba befunde i-imeyile? Ngaba ubonelele nge umnxeba kubo ukuba bathathe inyathelo?
Ngaba lukhona ulwazi olongezelelekileyo onokuthi ucele kulo umfundi oluya kukunceda ekujoliswe kuko kunye necandelo umxholo owukhuphelayo? Kutheni ungaceli ulwazi olunye kwi-imeyile nganye?
Ukhe wa vavanya i-imeyile kuluhlu olunedatha kwaye ngaphandle kwedatha ukubona ukuba imitya yokwenza ubuqu kunye nokuboniswa komxholo onamandla? Ngaba onke amakhonkco asebenze?
Ngaba ukhawuleza fikelela kwinqanaba okanye utyhafe ngenxa yemihlathi yentengiso ecaphukisayo? Abantu baxakekile-yeka ukuchitha ixesha labo!
Ngaba ubonelela abantu ngeendlela ze ukuphuma zonxibelelwano lwakho lwe-imeyile? Ukuba akunjalo-ngenene kuya kufuneka uhambe nemvume enkulu esekwe umboneleli wemeyile.
Ngaba ubonelela abantu ngendlela ukwabelana ngomxholo mhlawumbi ngokuthumela kwiqhosha lomhlobo okanye amaqhosha okwabelana noluntu? Kwaye ukuba bayabelana - ngaba iphepha lakho lokufika linokhetho lokubhalisa kuyo?
Ndiyarhuma kwaye ndizikhuphe kubhaliso kwii-imeyile ngalo lonke ixesha. Ndihlala ndinika inkampani inzuzo yokungathandabuzeki xa ndibhalisa kodwa nje ukuba ndizifumane ndicima ii-imeyile ezininzi kubo ngenxa yokuba zingenaxabiso… ndiyarhoxa kwaye ngekhe ndiphinde ndenze ishishini kwakhona inkampani. Ukuba uza kutyhala umyalezo komnye umntu- yibani nembeko kwaye ulihloniphe ixesha labo kwaye upapashe i-imeyile entle!